The Irrawaddy's Blog: ထင်ရှားသည့် ပြောင်းလဲမှုတွေက ဘာလဲ ??
ထင်ရှားသည့် ပြောင်းလဲမှုတွေက ဘာလဲ ??
ကြေးမှုံသတင်းစာက ထင်ရှားတဲ့ ပြောင်းလဲမှု ၂ ခုကို ထုတ်ပြထားပါတယ်။ပထမ ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် မိုဘိုင် တယ်လီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပြောင်းအလဲပါတဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု သုံးနေတဲ့ မိုဘိုင် တယ်လီဖုန်း ၃ သန်းရှိနေရာက သန်း ၃၀ ထိ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့။ဒုတိယ အပြောင်းအလဲက ကားအို ကားဟောင်းတွေ အသစ်လဲခွင့် ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီ ၂ ခုဟာ ထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲလို့ ဆိုထားပါကြောင်း။ Posted in:
မိုဘိုင်းဖုံးတစ်လုံးကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေထက် အဆ(၆၀၀)ခန့်ပိုပြီးဈေးကြီးတဲ့ နှုန်းနဲ့ ရိုက်စားလုပ်နေရာကနေ အဆ(၂၅၀)ခန့်ဈေးသို့ လျှော့ချပေးတာကို ပြောင်းလဲမှုဟု ဆိုရမည်။ တန်းတူဈေးနဲ့ ရောင်းပြီဆိုမှ တကယ်ပြောင်လဲမှုဖြစ်သွားပါမည်။